Comments By Postမင်္ဂလာပါ - Myo Thant - Phoe Thitsarသူ - ရွှေ ကြည် - Mobile13လူပါး ပုလင်းကွဲရှ - MaMa - MaMaကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - MaMa - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Miss Crystalline - MaMaရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - MaMa - N@ng Ghi Ghi Joe Zမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ko pauk mandalay - Novyယုံလား? - MaMa - ခရီးသည်ကြီးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - ခရီးသည်ကြီးCongress - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - parlayar 46ကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAအလှူခံဖလားကြီးပိုက်ကာပြန်လာတယ်..... - ဝရမ်းပြေးအဘဝက် - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - Myo Thant - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကထူးဆန်း - kyeemiteမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Myo Thant - ဘဲရှုပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ခင် ခ - Hnin Hninနယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ဘဲရှုပ် - Soe Naunk``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ခင် ခ - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - pazflor - အရှင် သခင် ဆရာ ကိုယ်တော် mobileဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Guest - - ဦးကြောင်ကြီးကတွတ်ပေါက် ဘဲဥစောင့် - Mobile13 - MaMaကား ဒုက္ခ - Mobile13 - ဆူးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Mobile13 - ဆူး``တံခါးဖွင့်ကာ ကမ်းလင့်ပါလို့ ……..။´´ - Mobile13 - uncle gyiအကြော် အကြော်.. - Mobile13 - bigchefဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - Mobile13 - kyeemiteEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77757 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67182 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58107 Kyats )MaMa (57596 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်